ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ Windows တင်တော့မယ် ဆိုရင် CD/DVD Drive မရှိလို့ အခက်အခဲ ဖြစ်နေသူ များအတွက် Flash Drive , USB Drive ကနေ Windows တင်လို့ရမယ့် နည်းလမ်းလေးကို ရေးပေးသွားပါမယ် အခု နည်းလမ်းလေးက Windows7တင်တဲ့ နည်းပါ.. XP တင်တဲ့ နည်းကတော့ ကျွန်တော် နောက်မှ ထပ်ရေး ပေးသွားပါမယ်..အခု နည်းလမ်းလေးက အရမ်းလဲလွယ်ပါတယ်.. ကျွန်တော် မလုပ်တက်သေး သူတွေပါ အဆင်ပြေပြေ နဲ့လုပ်တက်သွား အောင်အောက်မှာ တစ်ဆင့်ချင်း ရှင်းပြပေးထားပါတယ်..
အရင်ဆုံး Flash Drive ကနေ Windows7မတင်ခင် လိုအပ် တာလေးတွေကို ပြောပြပေး သွားပါမယ်..
1. Windows7image ISO File
2. USB Drive (4GB )
3.WinToFlash Software တို့လိုအပ် မှာဖြစ်ပါတယ်..
ကျွန်တော်တို့ Windows7image ISO File မရှိသေးတဲ့ သူများကတော့ ဒီအောက် ကလင့်မှာ ကိုနေမင်းမောင် တင်ပေးထားတဲ့ Windows7Collection ဆိုပြီး တင်ပေးထားတာ ရှိပါတယ်.. မိမိတို့ တင်ချင်တဲ့ Windows အမျိုးအစား ကိုရွေးပြီးတော့ သာဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ..
Windows7Collection Download
Windows ခွေကို ဒေါင်းလော့ချပြီးရင် အောက်ကပုံ မှာပြထားသလို ဖိုင်ဖြည်လိုက်ပါ.. ပြီးရင်အဲ့ဒီ Folder လေးကို Partation တစ်ခုထဲမှာ ထည့်ထားပေးပါ..
အောက်ကပုံမှာ ပြထားသလို Folder လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်..
အောက်ကပုံကတော့ ပေါ်ကပြထားတဲ့ ဖိုဒါထဲမှာပါတဲ့ Windows setup File တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်..
နောက်တစ်ချက် USB Flash Drive ကတော့ မိမိတို့ အစီအစဉ်နဲ့ ၀ယ်မယ်ဆိုရင်လဲ ၀ယ်လိုက်ပါ..။ ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းဆီက ယူပြီးငှားသုံးမယ် ဆိုရင်လဲသုံးပါ အဆင်ပြေသလိုသာ လုပ်ပါ.. USB Drive (4GB ) ဆိုအဆင်ပြေပါတယ်
နောက်တစ်ချက် WinToFlash ကိုတော့ သူရဲ့မူရင်း ဆိုဒ်မှာသွားပြီး ဒေါင်းလော့ ချရင်လဲရပါတယ်..ကျွန်တော် အောက်မှာလဲ တင်ပေးထားတာရှိပါတယ်..
ကျွန်တော်အပေါ် မှာပြောခဲ့တဲ့ အဆင့်သုံးဆင့် ကိုပြင်ဆင်ပြီး သွားပြီဆိုရင်တော့ Windows7ကို USB Drive မှဘယ်လို Install လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို အောက်မှာတစ်ဆင့်ချင်း ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်..
အရင်ဆုံး ဒေါင်းလော့ချထားတဲ့ WinToFlash လေးကိုမိမိတို့ရဲ့ စက်မှာ Run ပေးလိုက်ပါ..
အောက်ကပုံ အတိုင်းပေါ် လာပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ပြထားသလို အဆင့်ဆင့် လုပ်ပေး လိုက်ပါ..
ဒီအောက်က အဆင့်ကို ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့က စောစောက ဒေါင်းလော့ချပြီး ဖိုင်ဖြည်ထားတဲ့ Windows7image ဖိုင်ကို USB Drive ထဲကိုထည့်ပေး ရမှာဖြစ်ပါတယ်..ကျွန်တော် အောက်မှာ 1 နဲ့2ဆိုပြီး ပြပေးထားပါတယ်..1 ကတော့ စောစောက ဖိုင်ဖြည်ထားတဲ့ Windows7image Folder ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်..2ကတော့ ကျွန်တော်တို့ Windows တင်တဲ့အခါ အသုံးပြုမဲ့ USB Drive ကိုရွေးပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
အောက်ကပုံအတိုင်း ရွေးပေးပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ Next ကိုပေးလိုက်ပါ..
အောက်ကပုံအတိုင်း License တောင်ရင်တော့ Next time ပေးလိုက်ပါ..
အပေါ်က အဆင့်တွေကတော့ USB Drive ထဲမှာ Windows image ဖိုင်ကိုထည့်ပြီး ပြင်ဆင်တဲ့ အပိုင်းပါ..ကျွန်တော်တို့ နောက်တစ်ဆင့် Windows Installation လုပ်တဲ့အခါမှာ First Boot ကို USB HDD လို့ပြောင်းပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်..ဒါမှသာ Boot လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးလို့ Bios ကိုဝင်စစ်တဲ့အခါမှာ USB Drive ကိုတွေ့ မှာဖြစ်ပါတယ်..ကျွန်တော်ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ရှင်းပြပေးထားပါ တယ်.. အရင်ဆုံး မိမိတို့ ကွန်ပျူတာကို Restart ချလိုက်ပါ.. ပြီးရင် Keyboard မှ Delete Key ကိုနှိပ်ထားလိုက်ပါ.. ဒါဆိုရင် BIOS ထဲကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်..
အောက်ကပုံ အတိုင်း USB HDD ကိုရွေးပေးပြီးရင် Enter ခေါက်လိုက်ပါ..
ပြီးရင် Second Boot Device ကို Hard Disk လို့ပြောင်းပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်. အခုအတိုင်းပဲ ပြောင်းပေးလိုက်ပါ..
အောက်က ပုံအတိုင်းပြောင်းပြီးသွား ပြီဆိုရင်တော့ Keyboard မှ F10 ကိုနှိပ်ပြီး Save လိုက်ပါ..
အောက်ကပုံ အတိုင်းပေါ်လာပြီ ဆိုရင်တော့ Y ကိုနှိပ်ပြီး Enter ခေါက်ပေးလိုက်ယုံပါပဲ.. ဒါဆိုရင် BIOS ထဲမှာလည်း ပြင်ဆင်ပြီးသွားပါပြီ..
ဒီလောက် ဆိုရင်တော့ USB Drive ကနေ Windows တင်တာနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး အားလုံးပဲ အဆင်ပြေပြေ နဲ့လုပ်တက်သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်..
Posted by dawallay lay at 4:04:00 PM